March 2013 - ♥ ♥ MY GREEN LIFE ♥ ♥
Phyu Lwin March 16, 2013 10 Comments
Hallo,, Good morning :)
ခု မြန်မာပြည်ကနေ နှုတ်ဆက်နေတာပါ ... ပြန်ရောက်တာ ဒီနေ့ဆို တစ်ပတ်ပြည့်ပြီ ..။ ရောက်ရောက်ချင်း စီစဉ်စရာရှိတာတွေ စီစဉ်တာ.. ဘာညာသာရကာတွေတော့ ပြီးသွားပြီ ..။ ဘယ်မှတော့ မလည်ဖြစ်သေးပါဘူး..။ အလုပ်အရင်လုပ်ရဦးမယ်...။ ပြီးမှ လျှောက်လည်ဖို့ အစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်မှာ..။ ဒီရောက်တော့ ဖုန်းနဲ့ပဲ အင်တာနက်သုံးဖြစ်တယ်..။ တက်လိုက်ကျလိုက်ပဲ. ။ mail တော့ ကောင်းကောင်းစစ်လို့ရပါတယ်..။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်လိုက်ရင် လိုင်းက မကောင်းတော့ ဘာမှတော့ သိပ်သုံးမရ ...။ Online တိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ facebook ဆိုတာကြီးကျတော့ ဖုန်းနဲ့ ကောင်းကောင်းဝင်ရတယ်ဂျ >:o OMBuddha !!!
တကယ်က ကျမသုံးချင်တာ Google ပဲ သုံးချင်တာ .. လိုချင်တဲ့ Information က အဲမှာမှ ရှာရအဆင်ပြေတာကိုး..။ အဲဒါကျတော့ တက်လိုက်ကျလိုက် .. Link တစ်ခု နှိပ်လိုက်ရင် ရောက်ချင်မှရောက်တာမျိုး .. အမြင်ကပ်စရာကောင်းးတဲ့ facebook သုံးပြီး ဘာ information ရှာလို့ရမှာလဲကွယ် ... ရန်ဖြစ်နေတာတွေ ထိုင်ဖတ်နေရလောက်အောင် ကိုယ်လဲ အားနေတဲ့၊ အချိန်တွေပေါနေတဲ့ သူမျိုး မဟုတ်ဘူးလေ .. ahinttt ;(
Blog ထဲတော့ ၀င်လို့ရပါတယ်.. ရေးရမရဆိုတာ ခု စမ်းကြည့်နေတာ.. ဆိုင်တွေမှာ သွားသုံးရင်တော့ အေးအေးဆေးဆေးဝင်လို့ရလောက်တယ်.. ဒါပေမယ့် နေပူပူမသွားချင်ဘူး .. အဲဒါနဲ့ ဖုန်းက wifi လွှင့်ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ဝင် စာရေးကြည့်တာပါ.. ဓါတ်ပုံတွေ တင်ရမရတော့ မသိသေးပါဘူး..။ အခြား blog တွေ ၀င်ဖတ်ဖို့လဲ ပြန်ပြန်ကျသွားတာနဲ့ ဘယ်ကိုမှ သွားပြီး အားမပေးဖြစ် ..။ ပြန်ရောက်မှပဲ အားရပါးရ အလည်လာ စာဖတ်တော့မယ်နော်...။
ဓါတ်ပုံတွေ တင်ရမရ တင်ကြည့်တာ အရမ်းနှေးတယ်.. ဂျာမနီပြန်ရောက်မှပဲ သေသေချာချာ ခရီးသွားတဲ့အကြောင်းတွေ ရေးတော့မယ် .. :)
Korea ရောက်အမှတ်တရ ^^
Phyu Lwin March 08, 20139Comments
အားလုံး မင်္ဂလာပါနော် :D :D
မနေ့က (၇-၃-၂၀၁၃) ရက်နေ့ နေ့လည်က ဂျာမနီကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာဖို့ နေလည် ၁ နာရီကနေ စထွက်ခဲ့တယ်..။ ခဏခဏသာ ခရီးသွားတာ တစ်ယောက်တည်း တစ်ခါမှ မသွားဖူးဘူး..။ ဒီတစ်ခါတော့ တစ်ယောက်တည်း သွားဖြစ်တာပဲ ..။ ဒါပေမယ့် အားလုံးအဆင်ပြေပြေပါပဲ..။ Luggage အပ်တော့ ၂ ကီလိုပိုနေတယ်..။ ဘာမှမပြောပဲ ပေးသွားတယ်.. security check ရောက်တော့လည်း လူကိုလဲ မစစ် .. ခါးပတ်မေ့ပြီး မထည့်မိတာလဲ ဘာမှမပြောကြပြန်ဘူး ..။ ဒီတစ်ခါသွားရတာ တော်တော်ကို ချောချောမွေ့မွေ့ပဲ ..။
ဒီတစ်ခေါက်သွားဖြစ်တာက Korea airline နဲ့ပါ..။ ၀န်ဆောင်မှုတော်တော်ကောင်းတယ်.. ။ နောက်ဆိုလဲ သူတို့နဲ့ပဲ သွားချင်လောက်အောင်ကိုကောင်းတာ။ ကိုယ်ကလဲ အာရှသားပဲဆိုတော့ ကိုရီးယားပဲထင်ပြီး ကိုရီးယားလို လာလာပြောတာတစ်ခုပဲ.. သူတို့ ၂ ခါမောတာပေါ့..။ လေယာဉ်အဆင်းအတက်တွေကလဲ အရမ်းငြင်သာတယ်။ တခေါက် ဖိလစ်ပိုင်သွားတုန်းကဆိုရင် တရုတ်လေကြောင်းနဲ့သွားတုန်းက နားစည်တွေကွဲမတတ်ပဲ ။ ၃ ရက်လောက်ထိ နားတွေနာနေတုန်း။။ အဆင်းအတက်တွေမှာ အရှိန်မထိန်းတော့ ဖိအားအနိမ့်အမြင့်မတူတာကနေ နားတွေအူလာတာ ။။ ဒီတခါက ဆင်းမှန်းတက်မှန်းတောင် မသိလောက်အောင် ထိန်းမောင်းတာမျိူး ..။
အစားအသောက်လဲ မဆိုးပါဘူး.. ဒါပေမယ့် Emirates တို့ Thai Airways တို့ကို မမှီဘူး ..။
ဘီဘင်ဘတ် (Bibimbap) လို့ခေါ်တဲ့ ရိုးရာထမင်းသုပ်တဲ့..။ အဲဒါတော့ကြိုက်တယ်.. ဒါပေမယ့် စပ်တယ်..။
အခု ဘာလို့ ဒီပို့စ်ကိုရေးနေလဲဆိုရင် ... အခုလောလောဆယ် ကိုရီးယားက Incheon airport မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားဖို့ transit စောင့်နေတာ .. ၅ နာရီကျော်ကျော်ကြာမှာ..။ အဲဒါနဲ့ ရေးချင်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ ရေးနေတာ..။ Facebook က စာအုပ်တွေ ဒေါင်းနေတာလဲ လိုင်းကနှေးတော့ ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူး ..။
တကယ်က စာဖတ်နေရမှာ :P :P
လေဆိပ်ထဲမှာ Korea tratiditional cultural show နဲ့တွေ့နေတယ်.။
ဖုန်းနဲ့ရိုက်တာမို့ ဓါတ်ပုံတွေက ကွာလတီမကောင်းဘူး .. @@@
Thank you all !! See you later !:D
♥ အမှတ်တရ တစ်နှစ်ပတ်လည် & ခဏလောက်ဝေးနေမယ့်အကြောင်း ♥
Phyu Lwin March 04, 2013 13 Comments
အားလုံး မင်္ဂလာပါနော်..။ ဝေးနေတာကြာပေါ့ .. ဘယ်သူမှတော့ သိပ်သတိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး.. အစတည်းက တိတ်တိတ်လေးပဲနေတာဆိုတော့ ခဏပျောက်နေတာလည်း ရှိနေတာနဲ့ ဘာမှတော့မထူးပါဘူး ..။
၁ ရက်နေ့ကမှ စာမေးပွဲအားလုံးပြီးသွားတော့ အဲဒီအချိန်တွေမှာ စာလည်းမရေးဖြစ်ပါဘူး... ပျာယာခတ်နေတာနဲ့ပဲ ..။
ဒီပို့စ်ကို တကယ်က မနေ့က ရေးမလို့ ..။ ၃-၃-၂၀၁၂ ရက်နေ့က စခဲ့တာဆိုတော့ ၃-၃-၂၀၁၃ ရက်မှာ တစ်နှစ်ပြည့်တာလေ..။ ဒါပေမယ့် မနေ့က ဘယ်လိုမှ အချိန်ရှာမရခဲ့ဘူး..။ အချိန်ရလာတော့ အိပ်ချိန်ရောက်တော့ အိပ်ချင်လာတာနဲ့ စာမရေးဖြစ်တော့ဘူး.။
♥ အဲဒီနေ့ (၃-၃-၂၀၁၂) ကတည်းကစလို့ သူက ကျမဘ၀ထဲမှာ နေ့တိုင်းပါလာတယ်..။ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမအတွက် စိတ်ရှုပ်စရာ စိတ်ညစ်စရာတွေ ဘာတစ်ခုမှ မရှိခဲ့ဘူး..။ သူက ကျမအတွက် ပျော်ရွှင်မှုတွေပဲ သယ်ဆောင်လာပေးတယ်..။ သူရှိနေတဲ့အတွက် ... မိသားစုနဲ့ဝေးနေပေမယ့် ကျမအတွက် အထီးမကျန်ခဲ့ဘူး..။တစ်ကယ်က မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်တာမျိုးလည်းဖြစ်မှာပါ..။ ကျမလည်း သူ့ကို တခါတလေ ရှားရှားပါးပါးရှိလာတတ်တဲ့ ကျမရဲ့ စိတ်ရှုပ်စိတ်ညစ်စရာတွေ တစ်ခါမှ ဖွင့်မပြောပြဖြစ်ခဲ့ဘဲ ပျော်စရာ ကြည်နူးစရာလောက်ပဲ သိစေခဲ့တာ။
တစ်နှစ်ပြည့်ဆိုတာက ကျမ ဒီ Blog ကိုစဖွင့်ပြီး စာရေးတာ တစ်နှစ်ပြည့်တာပြောတာပါ..။ သူဆိုတာ ကျမချစ်တဲ့ ဒီဘလော့ဂ်လေးကို ရည်ညွှန်းတာပါ..။ အချိန်တွေကုန်မြန်တယ်.. တစ်နှစ်ဆိုပေမယ့် မနေ့တနေ့ကလိုပဲ ..။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်က ဒီဘလော့ဂ်လေးဖွင့်ပြီး .... အားတဲ့အချိန်တွေကို စာရေးဖြစ်ခဲ့တာ..။ နေ့တိုင်းမှာ ကွန်ပျူတာဖွင့်တာနဲ့ သူ့ကို ဖွင့်ကြည့်ဖြစ်တယ်..။ စာရေးရင်းပဲ ဟိုးအရင်ကတည်းက စာရေးတာဝါသနာပါတဲ့ပိုးက ပြန်ရှင်လာတယ်..။ စာရေးနေရရင်ပျော်တယ်..။ တခါတလေ အေးအေးဆေးဆေး စာရေးနေရတဲ့ဘ၀ကို လိုချင်လာမိတယ်..။ အိမ်နဲ့ ကျောင်းနဲ့ စာကြည့်တိုက်နဲ့ ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန်သွား .. အ၀တ်အစားလှလှပပ၀တ်ချိန်မရ .. အလှပြင်စရာအချိန်မရှိ ... တချိန်လုံးပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေရတာကို တခါတလေ ငြီးငွေ့လာတယ်... ဖတ်နေရတဲ့စာတွေကို တခါတလေ ... လှည့်ကြည့်ချင်စိတ်တောင် မရှိတော့ဘူး..။ အွန်လိုင်းကနေ ဒေါင်းပြီးစုထားတဲ့ မြန်မာစာတွေကို အရမ်းဖတ်ချင်တယ်...။ ဆရာမကြည်အေးရဲ့ ၀တ္ထုတွေ သေချာဖတ်ချင်တယ်..။ ဆရာမြသန်းတင့်ရဲ့ ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတွေ ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ သူ့ခေတ်ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ ၀တ္ထုတွေ ဖတ်ချင်တယ်..။
ပျော်စရာတစ်ခုမျှဝေရရင်တော့ အခုလာမယ့် ၇ ရက်နေ့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်မှာမို့ ခဏလောက်ဝေးနေမယ့် အကြောင်းပြောထားတာပါ..။ ဟိုမှာ ၃ လ နေမှာဆိုတော့ ဒီနှစ်သင်္ကြန်က ပိတောက်ပန်းတွေကို တွေ့ရဦးမှာ :D
ဇွန်လပထမပတ်ထဲ ဂျာမနီကို ပြန်ရောက်မှာဆိုတော့ ဒီ ၃ လမှာ အင်တာနက်အဆင်ပြေ ရင်တော့ ရောက်ရင်ရောက်လာဦးမှာပေါ့ ..။ ဘယ်လိုလဲတော့ သေချာမသိသေးဘူး။ ခုထိတော့ လိုင်းမကောင်းဘူး ဘာညာ ဖေ့ဘွတ်မှာ အော်နေကြတာ ကြားနေရတုန်းပဲဆိုတော့ Blog ၀င်ဖို့က အဆင်ပြေမပြေမသိ..။
စာတွေတော့ဖတ်ဖြစ်မှာပါ.. Thesis က အဲဒီမှာ ပြီးသလောက်ရေးခဲ့မှာမို့ ပျင်းတဲ့အချိန် ဘလော့အတွက် စာတွေရေးဖြစ်ပြီး ဂျာမနီပြန်ရောက်မှ တစ်နေ့တစ်ပုဒ်တင်တော့မယ် :)
ရောက်ရောက်ချင်း ရွှေတိဂုံဘုရားသွားဖူးမယ်..။ ပြီးရင် ရန်ကုန်မြို့ထဲ ခဏလျှောက်ကြည့်မယ်.. ။ နောက်လတွေထဲမှာ ပုဂံကို ဘုရားဖူးသွားဖြစ်မှာတော့ သေချာတယ်..။ တခြားတော့ သိပ်မစဉ်းစားရသေးဘူး..။ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့မယ်နော်.. အဝေးရောက်နေသူများအတွက် :D :D
အားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ... ♥ ♥
♥ အမှတ်တရ တစ်နှစ်ပတ်လည် & ခဏလောက်ဝေးနေမယ့်အကြောင်း...